29th March 2013 - Twi online
Friday Sermon: Learn the best Ways of worship and sacrifice - 29th March 2013 - Ashanti Twi Translation.
ƐFIADA NYAMESƐM: Ɔbɛnem Bosome da a ɛtͻ so 29, wͻ afe 2013
(Summary of Friday sermon – 29th March 2013 – Ashanti Twi Translation)
SUA AKWAN PA A YƐ FA SO SOM NA YƐBƆ AFƆREƐ.
Hadhrat Khalifatul Masih ɛmaa ɛnɛ Fiada yi Nyamesɛmka no firii Asͻredan a w’asi no foforͻ a wͻfrɛ no Baitul Rahman a ɛwͻ Valencia, Spain man mu. Ɔkenekan saa kyɛfa yi firii Kuraan Kronkron mu de hyɛ Nyamesɛmka no ase: “Na kae berɛ a Abraham ne Ishmael maa Efie no afapem so na wͻbͻͻ mpaeɛ sɛ, y’Awurade gye tom ma yɛn, ampaara sɛ, Wo na Wo yɛ sentiefoͻ a Wo nim biribiara. Y’Awurade, ma yɛnyɛ ahobrasefoͻ ma Wo na ma y’asefoͻ nso nyɛ nkorͻfokuo a wͻayɛ ahobraseɛ ama Woͻ. Na kyerɛ yɛn yɛnsom akwan nyinaa. Na fa ahummͻborͻ dane Wo ho bra yɛn so; afiri sɛ Wo na Wo yɛ Dane-Woho-mani ne Mmͻborͻhunufoͻ” (2:128-129).
Hadhrat Khalifatul Masih kaa sɛ ayɛyie nyinaa yɛ Nyankopͻn dea sɛ y’atumi asi asͻredan a ɛtͻso mienu wͻ Spain man mu. Ɔde kaa ho sɛ, mfie nson a atwa mu no na ͻkaa hyɛ mu kena mfasoͻ a enti ɛwͻ sɛ yɛsi asͻredan foforͻ wͻ Spain Basharat asͻredan mu wͻ Pedroadbad. Na yɛyɛɛ no nhyehyɛeɛ sɛ asͻredan a yɛbɛsi no bio no yɛbɛsi no wͻ Valencia. Ɛwͻ mu sɛ Ahmadiyyafoͻ a ɛwͻ saa bea yi yɛ ͻha ne aduasa (130) nanso deɛ nti a yɛpɛ sɛ yɛsi asͻredan a ɛtͻ so mienu wͻ Spain wͻ hͻ no gyina ɛhanom abakͻsɛm nti. Ahmadiyyafoͻ tumi sii saa asͻredan wei wͻ Spain wͻ mfie aduasa ntamu. Saa berɛ yi nkorͻfoͻ bebiree aba Spain abɛsisi asͻredan. Saa akwan wei bue maa wͻn aberɛ a yɛsii Basharat asͻredan no, nokorɛ ne sɛ, Jama’at Ahmadiyya tumi sii asͻredan wͻ Spain wͻ mfie ahensoo akyi nkorͻfoͻ dodoͻ a wͻwͻ Spain saa berɛ yi yɛ ͻpepe baako (1million) na y’anni bu sɛ ɛbɛduru afe 2030 no nkorͻfoͻ dodoͻ no bɛkͻ soro bɛyɛ sɛ ͻha nkyekyɛmu aduowͻtwe (80%) no bɛduru ͻpepe mienu (2 million). Mfie aduasa a atwa mu no, na nkorͻfoͻ bɛyɛ apem na wͻwͻ Spain man mu. Nkorͻfoͻ a wͻwͻ Spain no mu dodoͻ noara yɛ wͻn a wͻfiri Abibiman ɛtifi afa muna yɛbɛtumi aka sɛ mfie a atwa mu kͻ no, bɛyɛɛ Akristofoͻ no nanso wͻn na wͻtumi sie wͻn gyidie a w’asan abɛyɛ Islam bio no. Nyankopͻn adom nti nkorͻfoͻ bebiree wͻ Spain na saa nkͻsoͻ wei baa mu wͻ Ahmadiyya kuo yi nti.
Ampaara sɛ, yɛbɛhunu Islam a edi mu no wͻ Spain wͻ aberɛ a Muhammadan Messiah (ANN) no nkoa no bɛdwene ho sɛ wͻ tebea siteɛ na wͻde asɛm no bɛhyeta ama obiara anya bi wͻ asaase no so. Ebinom ka sɛ Ahmadiyyafoͻ kakeraa bi na wͻ ha, ɛbɛyɛ dɛn na wͻn de asɛm no akͻ obiara hͻ? Nokorɛ sɛ, sɛ obi yɛ n’adwene paa sɛ ͻbɛyɛ na sɛ ͻyere ne ho a, ͻbɛtumi ayɛ. Yɛdwene ɛkwan a yɛbɛfa so ayɛ nanso y’annfa anyɛ adwuma. Ɛkwan a Hadhrat Khalifatul Masih anaa sɛ Hadhrat Khalifatul Masih a ͻtͻ so ɛnan ɛde maa yɛn no y’annfa annyɛ adwuma.
Bea a Basharat asͻrdan no si no ɛbɛn kwantenpͻn a yɛfa so kͻ Cordoba. Sɛ anka yɛfaa kwan bi so a, anka yɛde yɛ kuo no too dwa ɛfiri hͻ. Akuo afoforͻ a aka no, ɛwͻ mu sɛ wͻn swa deɛ, nanso wͻn de y’asɛm no akͻ akyiri ama nipa bebiree ɛnam krataa kyekyɛ so na nipa bebiree firi abͻnten bɛhwɛ Basharat asͻredan no. Sɛ anka yɛde ɛneɛma too ɛkwan mu a anka yɛ bɛtumi ɛde ato dwa. Sɛ nkorͻfoͻ kuo a aka no bɛtumi de nipa mpem aduonu (20,000), nkorͻfoͻ a wͻdii kan wͻ Spain no asan aba Islam mu, sɛn na yɛn nkyerɛkyerɛ a ɛfa nokorɛ Islam no ho no ntumi ? Ampaara sɛ, yɛn na yɛbue ɛkwan maa wei nyinaa nanso y’anntumi ammfa ɛkwan no annyɛ adwuma wͻ akokoduro mu, a afoforͻ ɛnyaa hoo akwanya. Wͻn a wͻwͻ dibrɛ wͻ Jama’at no mu no wͻ mpɛnpɛnsoͻ biara no nyɛ wͻn afamu deɛ, yɛ dwene na yɛn amfa yɛn anni mmu na yɛn yere yɛn ho sɛ yɛbɛtumi anya.
Islam a edi mu paa no a yɛde to dwa no, ɛho hia sɛ yɛbͻ ho dawuro wͻ ewiase saa berɛ wei. Nipa a wͻfiri Spain man no mu ne nkorͻfoͻ a wͻdii kan no mu no, ɛwͻ sɛ wͻn hunu sɛ ɛyɛ mmerɛ sɛ yɛ sesa basabasayͻ a ɛwuraa wͻn nananom mu no. Ɛno nti saa nsesaeɛ wei sei enni kwan sɛ yɛyɛ no wͻ nhyɛ so. Ɛfiri sɛ Islam kyerɛ sɛ enni sɛ nhyɛ ba Nyamesom mu (2:257) na Onyankopͻn ka sɛ enni kwan sɛ nkorͻfoͻ ho tan ma wo yɛ obi a ͻnni pɛpɛɛpɛyͻ na Ɔhyɛ yɛn sɛ, monyɛ pɛ mmerɛ nyinaa, ɛno na ɛbɛn teneneeyͻ (5:9). Teneneeyͻ anaa Nyamesuro (Taqwa) nkoara na ɛde obi abɛn Nyankopͻn. Na afei, asɛmbusa biara nni hͻ fa ͻtan ho wͻ ha, saa nkorͻfoͻ wei yɛ kuro mma na wͻn na ɛhia sɛ saa ͻdͻ asɛm ne asomdwie yi ho hia sɛ ɛbɛkͻ. Ɛhia sɛ ɛwͻ sɛ yɛdi kan ka kyerɛ wͻn na wͻhunu Islam nkyerɛkyerɛpa no na afei yɛtumi di wͻn akoma so nkunim wɛ Islam nkyerɛkyerɛ a ɛdi mu no so. Akoma no a wͻhyɛɛ wͻn ma wͻde Nyame foforͻ bataa Onyaankopͻn ho no wͻ sɛ Onyankopͻn Koroyͻ no timtim wͻ mu ne Ɔkͻhyɛni Kronkron (NNN) sɛ ͻyɛ Ne kͻmhyɛni a ͻyɛ ahummͻborͻ ma ewiase nyinaa, Rahmatullih A’lameen. Saa Muslimfoͻ dada no, ɛwͻ sɛ yɛhwehwɛ na ͻdͻ a ɛwͻ nokorɛ som no ho no yɛde hyɛ wͻn mu na wͻsesa bɛyɛ asͻfoͻ ma gyidie yi.
Ade korͻ nti a Hadhrat Khalifatul Masih yii Valencia sɛ yɛn nsi asͻredan no ne sɛ Spainman abakͻsɛm kyerɛ yɛn sɛ aberɛ a ͻhene ne ͻhemaa atirimmͻdenfoͻ de nhyɛ maa Muslimfoͻ bɛyɛɛ Kristosom no. Valencia nkoara na basabasayͻ wei nyinaa akyiri no na wͻn kͻso ka Arabic kasa. Nkorͻfoͻ a na wͻn wͻ Valencia no kͻͻso som Onyankopͻn na wͻn annsesa wͻn nkyerɛkyerɛ no aberɛ ko a Muslimfoͻ afoforͻ a wͻaka wͻ Spain no ammfa wͻn gyidie no anto dwa pefee. Aberɛ a ͻhene no pɛɛsɛ ͻbɛpam Muslimfoͻ afiri Spain wͻ mfie apem ahensia (1600s) no mu no, Muslimfoͻ a wͻwͻ Valencia na wͻdii kan tuu wͻn so sa ɛfiri sɛ na wͻn ɛkͻ so edi wͻn gyidie no akyi. Saa aberɛ no, na Spainish Muslimfoͻ no yɛ merɛ wͻ sikasɛm mu, na na wͻ pam wͻn firii kuro akɛseɛ no mu na wͻtu pansam yɛ. Saa ara na ahemfo afoforͻ bɛdii Spain soͻ. Italy asraafoͻ ɛdaa suban bͻne adi a akyire yi wͻn de Muslimfoͻ mmͻfra bi kͻͻ Akristofoͻ abusua mu a wͻn yɛɛ wͻn nkoa ne asomfoͻ. Saa mmͻfra wei wͻyͻͻ no akyiwadeɛ maa wͻn sɛ wͻbɛsom Onyankopͻn Baako no na wͻn maa wͻn faa Nyame abaasa korͻ no. Ɛnnɛ ɛyɛ yɛn asɛdeɛ sɛ yɛma wͻn san bɛsom Onyankopͻn baako no na ɛwͻ sɛ yɛde saa asɛm wei ma afoforͻ nso. Noho suo a ɛfiri nipa ayamuyie mu na yɛn dwene ma wͻn deɛ yɛ dwene de ma yɛn ho. Ɛwͻ sɛ yɛ yere yɛn ho wͻ wei ho ɛnkanka ahanom ɛfiri sɛ saa bea wei ɛfiri sɛ ɛhanom na wͻsͻͻ Islam mu kͻsii awieɛ. Ɛhanom wͻapam Muslimfoͻ wͻ ha mfie ahensia a atwa mu no, ɛhanom ɛbaa wͻ mfie ahenan a atwa mu no. Akyinyɛ biara nni ho ɛwͻ mu sɛ mfie bebiree akyi a wͻdii Spain so no, Islam fͻm kͻ ma hweaseɛ ɛbaaeɛ wͻ wͻn a w’ahoͻya a ho.
Nanso Khalifa tema ͻta ͻhene a ͻyɛ n’adwuma ne atitirifoͻ no reyɛɛ pɛpɛɛpɛ. obiara ayɛ ne famu deɛ na saa ara na bibiara bɛkͻ n’awieɛ. Seisei a Khilafat ɛma Bͻhyɛ Messiah (ANN) no ɛreyͻ adwuma, ɛyɛ n’akyidifoͻ no asɛdeɛ sɛ deɛ ayera no wͻsande bɛ na wͻsan de saa nkorͻfoͻ yi bɛba “obiara nni hͻ a ɛwͻ sɛ yɛsom no kyɛn sɛ Onyankopͻn na Muhammad (NNN) yɛ N’akoa ne Ne somafoͻ”. Onyankopͻn aboɛ yɛn ama y’asi asɛredan wͻ saa bea yin a yɛn yaa bea papa maa saa dwumadie yi. Asͻredan no bɛn kwantenpͻn na wei bɛyɛ bea sa ɛwͻ animonyam na ɛwͻ wͻn a wͻdi wͻn ho ni wͻ Onyankopͻn N’adom nti. Ɛnni kwan sɛ y’ani agye sɛ yɛtumi asi asͻredan fɛɛfɛ wͻ akuro kɛseɛ baako mu wͻ Spain. Ɛwͻ sɛ yɛhwɛ yɛn anamontuo mu yie, ɛwͻ sɛ yɛhwɛ yɛsom no mpɛnpɛnsoͻ nso yie saara nso na ɛwͻ sɛ yɛhwɛ yɛn asɛdeɛ nso yie.
Kuraan kyɛfa a me kenkan no wͻ mfiti aseɛ no kyerɛ fͻkwan soronko a Hadhrat Abraham ne Hadhrat Ishmael (ANN) akyerɛ yɛn sɛnea yɛbɛdi yɛn asɛdeɛ so pɛpɛɛpɛ wͻ berɛ a yɛ asi Nyankopͻn fie awie. Ɛho hia sɛ yɛbɛda saa nsɛm yi adi sɛdeɛ ɛbɛyɛ a akyiri mma a wͻbɛba daakye no wͻde Nyankopͻn asɛdeɛ bɛma No. Saa kyɛfa yi gyina hͻ ma mpaebͻ a Hadhrat Ibrahim bͻeɛ wͻ berɛ a ͻresi Ka’ba no. afͻdeɛ a Papa (Agya) no bͻͻ no wͻ mfie pii akyi no, ne ba barima ne ne yere no ambͻ mpaeɛ amma no anyɛ kwa. “O Nyankopͻn yɛabͻ afͻdeɛ wͻ W’akwan so wͻ merɛ tenten mu wͻ berɛ a W’ahyɛ yɛn sɛ yɛn yͻ”. Ɛyɛ yɛn apɛdeɛ sɛ Wobɛtie na W’agye yɛn afͻdeɛ nyinaa ato mu na ma yɛn ahotͻ. Nyɛ Ahmadiyyafoͻ nhyehyɛeɛ na mmom ɛyɛ Muslim kuo ahodoͻ a aka no na wͻka wͻn afͻdeɛ kakra a wͻbɛbͻ no de to dwa ma obiara te bi. Nhwɛsoͻ a Nyankopͻn ada no adi nam Ne Kͻmhyɛni yi so ne sɛ, Ne ba no tuu ne ho sii hͻ sɛ, n’agya no mfa no mbͻ afͻdeɛ nna agya no nso boa ne sɛ ͻde ne ba no a w’awo no wͻ mpanin mfie so, bɛbͻ afͻdeɛ no. Ebio nsoͻkͻgyaene yere ne ne ba wͻ asaase wesee so maa mmerɛ no baeɛ maa Nyankopͻn gyee ne yere ne ne ba no afͻdeɛ too mu na Ɔdomm wͻn ahiadeɛ nyinaa. Berɛ a wͻ sii Ka’ba no, saa nipa mienu yi (Hadhrat Ibrahim ne ne ba Hadhrat Ishmael) kaa sɛ, wͻn botaeɛ ne sɛ, wͻde nipa dodoͻ bɛhyɛ Nyankopͻn fie no ma. Wͻ gyinaso sɛ, wͻde agyidifoͻ a wͻbɛyɛ Nyankopͻn asɛdeɛ na wͻn afa Nyamesom no akͻduru mpɛnpɛnsoͻ a ɛkͻ nkan no na wͻde wͻn bɛhyɛ Nyame fie hͻ ma. Na saa nkorͻfoͻ yi, resi Nyame fie wͻ berɛ Nyankopͻn ahyɛ wͻn na wͻn ahoberɛaseɛ ne wͻn dͻ mma Nyame no kͻ baa no sɛ wͻ berɛɛ wͻn ho ase frɛɛ Nyame sɛ Ɔngye wͻn afͻdeɛ ntomu.
Wei ne asuade hunu ma afͻrebͻ. Sɛ obi bɛbͻ afͻreɛ na w’adan n’ani ahwɛ Nyankopͻn wͻ ahobraseɛ mu na w’abͻ mpaeɛ akyerɛ No sɛ Ɔngye afͻreɛ a w’abͻ no ntomu. Ɛyɛ saa Ibrahim ne Ishmael neyɛeɛ ne mpaebͻ na ɛtwe yɛn adwene si so sɛ, yɛdi obi a ͻwͻ atuhoakyɛ ne ͻdͻ soronko ma Kͻmhyɛni Kronkron (NNN) no, nyame ama no Abraham abͻdin wͻ saa mmerɛ yi mu. Obi a ͻsii gyidie no fapem na ͻsieisie Islam nokorɛ no na ͻdaa no adi kyerɛɛ awiase nyinaa wͻ animuonyam kwan so ma no kͻbae sɛ wͻn a wͻnyɛ Muslimfoͻ aka sɛ, sɛ wei nyɛ Islam a ɛndeɛ yɛtwe yɛn asɛm a yɛka tia Islam no sann.
Nnɛ mmerɛ yi, Ka’ba no botaeɛ no aba mu ɛnam Abraham ne Islam nkyerɛkyerɛ pa no han no, yɛde ayɛ adansidie a ɛma saa botaeɛ yi hyɛ ma ɛnna saa asͻredan yi a yɛato no din “Baitul Rahman” yi yɛ ahokeka a ɛda saa botaeɛ yi adi. Berɛ a saa asͻredan yi rekae yɛn ama yɛn abrɛ yɛn ho ase wͻ yɛn botaeɛ so no, ɛsan twe yɛn adwene si so sɛ, yɛbɛdi yɛn bͻhyɛ so ɛne yɛn asɛdeɛ so. Wei nko na yɛbɛtumi anya yɛn botaeɛ. Yɛka si so pi sɛ, “O Muhammad (NNN) kͻmhyɛni, ͻnokwarefoͻ ne atuhoakyɛni ma Ɔkͻmhyɛni Kronkron (NNN) yɛahyɛ wo bͻ sɛ, yɛbɛdi wo gyidie akyi sɛdea awiamu neɛma na yɛahyeta Wo baakoyͻ no (Tawheed). Asͻredan yi a yɛn asi yi, bɛtwe awiase nyinaa adwene aba Islam so na yɛbue Nyamesɛmka (Tabligh) nkorabata . Yɛrehyɛ yɛn asɛdeɛ ma na yɛreyɛ deɛ yɛn ahoͻden bɛtumi no, yɛn asɛdeɛ a adi kan ne sɛ, yɛbɛda Nyankopͻn baako no adi, na yɛn ama nipa a wͻwͻ kuro no mu no abɛdi Ɔkͻmhyɛni Kronkron (NNN) no akyi. “ O Nyankopͻn , O Otiefoͻ, Nyame a Ɔnim adeɛ nyinaa, Wonim yɛn mfomsoͻ, gye yɛn mpaebͻ yoi to mu na fa yɛn mfomsoͻ kyɛ yɛn na ma yɛn ndi yɛn botaeɛ so.
Nokorɛ sɛ, asͻreda yi ne fɛ ne ne kɛseyɛ bɛtumi ada adi wͻ berɛ a yɛbɛdi yɛn asɛdeɛ so. Sɛ yɛyɛ yɛn asɛdeɛ sɛ yɛbɛsom Nyame na yɛn asɛdeɛ ma nipa sɛdeɛ bɛyɛ a nhwɛso pa a ɛwͻ Islam nkyerɛkyerɛ mu no bɛyɛ adansedie na nipa atwe wͻn ho abɛnno. Wͻ berɛ a Muslimfoͻ dii Spain so wͻ mfie pii no, wͻsii asͻredan fɛɛfɛ pii, sɛ ebia asͻredan a ɛwͻ Cordoba no, ne fɛ no yɛ soronko na wͻ sii asͻredan a adi mu pii wͻ baabiara a Muslimfoͻ no kͻeɛ, baako nso wͻ Granada, kwan biara so no, sɛ gyidie ma Islam nkyerɛkyerɛ pa no pa wͻn a wͻsii saa nsͻredan yi a, ɛndeɛ saa nsͻredan yi kyerɛɛ Nyankopͻn baako no, wͻsɛeɛ no anaa wͻde yɛɛ Akristofoͻ asͻredan. Berɛ a Muslimfoͻ gyidie yeraeɛ no, asͻredan no nkyerɛkyerɛmu. Asɛm pͻtee no yɛ sunsum mu gyidie ma wͻn a wͻde asͻre no. Ɛwɛ sɛ yɛbͻ gyidie ne sunsum na ɛwͻ asͻre yi ho ban wͻ berɛ a yɛde adwuma den ne mpaebͻ. Sɛdeɛ bɛyɛ a Nyame bɛkͻso apagya nkorͻfoͻ wͻ yɛn mu wͻn ahyɛ gyidie no mu kena sɛdeɛ bɛyɛ a ɛbɛyɛ Nyankopͻn no beaɛ kͻpem atɛn muda berɛ no.
Kyɛfa a ɛtͻso mienu a me kenkan no wͻ mfitiaseɛ no, Akͻmhyɛfoͻ akukudam no ambͻ mpaeɛ amma wͻn nkoa ho, na mmom wͻbͻͻ bi maa wͻn mma ne wͻn asefoͻ nyinaa sɛ wͻbɛdi so, wei ne kwan a yɛfasobͻ mpaeɛ ne tirimpͻ ma wͻn a wͻpɛ sɛ wͻn asefoͻ nyinaa bɛdi yie. Wͻ saa ahokeka yi “Ɛyɛ Nyame pɛ a” (Insha Allah) yɛbɛdi nkonim na yɛn mpaebͻ ama yɛn mma ayɛ ateneneefoͻ ama yɛn botaeɛ a yɛrehwehwɛ no yɛn nsa aka no wͻ Nyame fie. Yɛn afɛreɛ bɛdi mu wͻ berɛ a yɛbɛkͻ so anya nipa a wͻyɛ Nyame asɛdeɛ ne nipa asɛdeɛ. Ɛwͻ sɛ yɛbͻ mpaeɛ ma Nyame sɛdeɛ Akͻmhyɛfoͻ no yͻeɛ no. “Na kyerɛ yɛn kwan a yɛbɛfa so asom”. Saa kwan a yɛsom ne yɛbͻ afͻdeɛ da adi wͻ Nyankopͻn ahobanbͻ ho. Nimdeɛ ne anisuadehunu a yɛde bɛte saa asɛm yi ase no yɛ Nyame no adom. Na yɛwͻ nkorͻfoͻ kuo bi a, Nyame aka sɛ wͻn asͻreyͻ no bɛyɛ adesoa ne sɛeɛ ama wͻn. Obiara mbͻ mͻden sɛ ͻbɛyɛ asͻre a Nyankopͻn de N’adom no bɛgye ato mu. Saa kwan yi so no, biribiara yɛyɛ no wͻ Nyame akwan so biara no bɛyɛ ͻsom, mpo sɛ ɛyɛ nipa mmoa a.
Ɛwͻ sɛ yɛde ahokeka soronko bͻ mpaeɛ ma yɛn mma. Yɛhyɛ bͻ wͻ yɛn nhyiamu di sɛ, yɛbɛyɛ krado abͻ afͻdeɛ biara. Ɛwɛ sɛ yɛde saa gyidie yi hyɛ yɛn asefoͻ no mu. Ɛwͻ sɛ yɛhunu sɛ, mmerɛ kͻ so no afͻrebͻ tebea no sesa. Berɛ a Muslimfoͻ a atwa mu no baa Spain bɛhyetaa asɛmpa no, wͻn de sekan na wͻde gye Islam sii hͻ. Enti afͻrebͻ wͻ saa berɛ yi mu yɛ Nyamesɛmka (Tabligh). Ɛyɛ sika afͻrebͻ a yɛyi de boa asͻredan sie no. Afͻrebͻ tebea no sesa wͻ tebea bi mu. Hadhrat Ibrahim (ANN) bͻͻ mpaeɛ sɛ, Nyame nkyerɛ no kwan a ͻbɛbͻ afͻreɛ enti ɛnam wei so ama Nyame ama yɛn ahobanbͻ ne nkyerɛkyerɛ mmra sɛ ɛwͻ sɛ yɛbͻ afɛreɛ wͻ tebea a yɛwͻ mu. Ɛwͻ sɛ yɛn ho te sɛdeɛ Nyame ani bɛgye yɛn ho. Wei nti na Ɔkͻmhyɛni Kronkron (NNN) ama yɛn abrabͻ pa bi nhwɛsoͻ sɛ ɛyɛ afͻrebͻ no. Tahajjud ne sɛ ebinom bɛko wͻ Nyame kwan so (Jihad). Abrabͻ anaa ahotee a yɛn nni no yɛ abrabͻpa kɛseɛ ma yɛn na ɛno nkoa yɛ kwan a yɛbɛsom nna ɛno nsonkoa ne yɛn kwan a yɛbͻ afͻreɛ. Saa mpaebͻ yi si so pi sɛ, ɛbɛyi yɛn ne yɛn mma mfomsoͻ afiri hͻ. Ɛwͻ sɛ yɛkae no da biara sɛ, yɛntumi nya ͻsompa wͻ yɛn ara pɛ mu anaa yɛn afͻrebͻ mu. Wei nti na mpaeɛ ka sɛ; “Na mo ndane mo ani mbra yɛn nkyɛn wͻ ahummͻborͻ mu…” sɛdeɛ ɛbɛyɛ a afͻrebͻ no bɛma yɛn abͻ afͻreɛ pii na Nyamesom abɛyɛ yɛn tirimpͻ.
Saa nkurͻfoͻ wei tiri ayɛ yie; wͻn a wͻbɛdi saa ͻkwan yi akyi na wͻn mfomsoͻ ne wͻn bͻne nyinaa akyi no, wͻbɛhwehwɛ Onyankopͻn nkyɛn sumabrɛ na w’abͻ mpaeɛ ama wͻn nkyirimma na w’ada saa suban yi adi wͻ wͻn mu. Ɛwͻ sɛ yɛtwe y’adwene kͻ wei so sɛ, yɛde deɛ ɛfata ͻdasani biara bɛma no na y’atwe yɛn ho afiri ahantan ne akakabensɛm ho. Sɛ yɛyͻ merɛ wͻ dͻm-asͻryͻ mu a, yɛni ho dwuma. Sɛ yɛnnyͻ y’awofoͻ asɛdeɛ a, ɛwͻ sɛ yɛ yͻ. Sɛ yɛnnyͻ afipamfoͻ nso asɛdeɛ a, ɛwͻ sɛ yɛdi ho dwuma na yɛtwe wͻn ba Islam Ahmadiyya, nokwasom no mu. Sɛ yɛtumi yͻ saa teneneeyͻ yi nyinaa a, na Otumfoͻ Onyankopͻn bɛtie yɛn sufrɛ na Wͻahunu yɛn mmͻbͻ. sɛ yɛrehwehwɛ Onyankopͻn nkyɛn ahummͻborͻ deɛ a, ɛwͻ sɛ yɛhunu afoforͻ mͻbͻ.
Sɛ ogyidini taa kͻ asͻrefie mu wͻ akoma pa mu paa ara yie a, tenenee pono no bue ma no na ͻnya bͻne-fafiri. Nnɛ, saa asͻredan yi a Otumfoͻ Onyankopͻn de ayɛ yɛn adom yi, ɛsɛ sɛ ɛtwe y’adwene kͻ saa neɛma yi so. Ɛyɛ Nyankopͻn pɛ a, ɛwͻ sɛ wͻn a wͻte bɛn asͻredan yi ne wͻn mmͻfra nyinaa hyɛ asͻredan no ma. Yɛsrɛ Onyankopͻn sɛ, nhyira ne adom a ɛwͻ saa asͻredan yi mu biara Ɔnfa nyɛ yɛn adom na Ɔntie yɛn sufrɛ na Ɔnfa yɛn mfomsoͻ nkyɛ yɛn daa. Nnɛ ɛwͻ sɛ yɛyɛ Jihad. Islam ho dawubͻ nso yɛ Jihad nti ɛwͻ sɛ yɛtwe y’adwene kͻ so. Onyankopͻn ammoa yɛn na yɛntumi nyͻ. Onyankopͻn N’adom no ba wͻ berɛ a y’ayɛ Ne som no ho asɛdeɛ.
Sɛ yɛyͻ y’asͻre yie na yɛyͻ saa Jihad yi bi; sɛ yɛbɛbͻ Nyamesɛm ho dawuro a, yɛbɛnya Onyankopͻn N’adom. Wͻ nnɛ merɛ yi mu no, saa Jihad yi bi na nipa hia paa. Saa Jihad yi bɛma y’anya Onyankopͻn N’adom na abͻ yɛn ne yɛn mmͻfra ho ban afiri bͻne ho. Mo ma akoma pa mu asͻreyͻ nhyɛ saa asͻredan yi ma. Onyankopͻn moa na saa asͻredan yi ntumi nyͻ ne botaeɛ na yɛn nso ntumi nyͻ y’asɛdeɛ daa. Wͻadi kan asi asͻredan bi wͻ saa bea yi mu a Egypt ne Saudi Arabia na asͻ w’asene. Ahmadiyya Asͻredan yi na ɛbɛtumi akyerɛ adeɛ a saa asͻredan yi ahwereɛ esan sɛ wͻapo Muhammad Messiah (ANN) no nti. Ɛwͻ sɛ saa asɛm yi ma Ahmadiyyani biara hunu asodie kɛseɛ no. otumfoͻ Onyankopͻn moa mo na montumi nyͻ saa.
Sɛ yɛhwɛ sɛdeɛ saa asͻredan yi si teɛ a, wͻasi no wͻ asaase a nsusueɛ no yɛ adaka anamͻn 1350 a ne boͻ yɛ ͻpepe baako ne akyire pͻ mienu (1.2milliom) Euros a Spain Jama’at no boa kakraa bi. Sɛ sika ntawantawa bi wͻ hͻ a, ɛwͻ sɛ wͻn a w’abͻ anohoba no hyɛ no ma, sɛ yɛboa Nyamesɛmka (Tabligh) nwuma mu nso a, ɛno nso bɛtumi aboa. Wͻkyerɛ sɛ ɛdan no bɛfa nipa bɛyɛ 250, nanso emu ɛso yie paa. Afei nso adan apie bɛyɛ nson, ne korabea ne nfidi dan nso ka ho. Wͻayͻ bi akyerɛ sɛ, y’ahunu asͻrefie a ɛso paa wͻ bea ha nyinaa. Ampaara sɛ, obiara yͻ asͻredan no asɛdeɛ a, koowaa krataa no kaa bio sɛ, Ahmadiyyafoͻ Nyamesom akyi no, wͻtia obiara a wͻbɛkum wͻ Nyame din mu. Yɛsrɛ Onyankopͻn sɛ, Ɔma saa asͻredan yi nkyerɛ Islam ma wͻn wͻwͻ saa bea ne mantam ho na ɛmoa ma Ahmadiyyani biara ntumi nyɛ n’asɛdeɛ.
Asͻredan yi sie mu no, mmoa dodoͻ no ara firi asoeɛ hͻ. Nfidi nwuma ho moa nso firi asoeɛ hͻ. Yɛn panin Chaundhry Ijaz sahib hyehyɛɛ nwuma bebiree ne ntotoeɛ. Ɔmaa ɛka kͻͻ fͻm berɛ a na ɛdͻͻso. Ɔnte apͻ na naawͻtwe biara ͻkͻ ayaresabea nanso ͻyͻͻ adwuma den. Yɛsrɛ Otumfoͻ Onyankopͻn sɛ Ɔmoa no na Ɔnsa no yadeɛ na Wͻma no nkwa tenten na wͻatumi asom Jama’at daa.